Sarimihetsika : halefa ho an’ny besinimaro ny « Selfie, salle fille » | NewsMada
Sarimihetsika : halefa ho an’ny besinimaro ny « Selfie, salle fille »
Fialamboly amin’ny maha sarimihetsika azy. Izay eo ihany, fa mihoatra lavitra kokoa ny « Selfie, salle fille ». Afaka manamarina izany ireo efa nahita nandritra ireo fandefasana manokana sady fampahafantarana, ity sarimihetsika ity. Manam-potoana hahatsapana azy kosa ireo liana, satria halefa ho an’ny besinimaro izany, ny alahady 6 marsa izao, eny amin’ny CCEsca Antanimena.
Miresaka ny tanora, avy amin’ny tanora ary miantefa amin’ny tanora. Niainga tamin’izay fomba fijery izay, i Anjara Rasoanaivo, tamin’ny fanatontosana ity sarimihetsika ity. Tsy miafinkafina ny fiainan-jatovo amin’izao fotoana izao, na any an-tsekoly na eny anivon’ny fiarahaamonina rehetra eny. Manana toerana goavana eo amin’ny fiainan’ireo zatovo ireo tambajotra sosialy amin’ny alalan’ny « internet », ny finday, sns. Izay lafiny izay rahateo no tena asongadin’ny tantara.
Mifototra amin’ny fialonana sy ny fitsiriritana, tsy afa-misaraka amin’ny fiainan-jatovo ny « Selfie, salle fille ». Hahitana ilay voaloham-pitiavana mitsapatsapa sy miraparapa ihany koa, izay miainga eny amin’ny lycée. Mifono hafatra sy hevitra maro, saingy tsy be fananarana toy ny sarimihetsika mahazatra fa tena maneho ny zava-misy amin’izao fotoana izao izany.
Tafaraka ao anatin’ny « Selfie, salle fille » ny talenta vao eo amin’ny filalaovana sarimihetsika, sy ny traikefan’ireo mpaka sary, mpandrindra fa indrindra ny mpanatontosa. Ho an’ny tanora, saingy tsy nataotao foana ny vokatra. Marihina fa tsy hivoaka amin’ny endriny DVD mihitsy ny « Selfie, salle fille », mba hamerenana ihany koa ny hasin’ny fijerena sarimihetsika anaty efitra natokana ho an’izany.